जब राज्य ढँटुवा हुन्छ | Nagarik News - Nepal Republic Media
२६ श्रावण २०७४ २१ मिनेट पाठ
'मेरा कवचहरू यति बलिया छन् कि तिनलाई केहीले पनि छेड्न सक्तैन,' ग्राहकहरूका अगाडि ऊ यसरी फुइँ लगाउँथ्यो, 'मेरा भाला यति तिखा छन् कि तिनले नछेड्ने कुनै चीज यस दुनियाँमा छैन।'
एक दिन कसैले उसलाई सोध्यो, 'तिम्रो कुनै भालाले कुनै कवचलाई निशाना बनाउँदा नि?'
(हान फेई जि, 'एन्सेन्ट चाइनिज फेबुल्स' बाट)
नेपालको राज्यव्यवस्था सञ्चालकहरू त्यस्तो व्यापारीझैँ भएका छन् जोसँग बिकाउनका लागि आ–आफ्ना एजेन्डा त छन् तर तिम्रो एजेन्डाले के काम गर्छ भनेर जनताले सोधेका प्रश्नको ठोस उत्तर छैन। बेला बेला उनीहरू जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको, संघीयता र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको र सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको दाबी गर्छन्। यसो हेर्दा कसैलाई पनि यिनका भाला र कवच राम्रै हुन् कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर समग्र अवस्थाले त्यसो भन्दैन। तिनले नेपाललाई द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने उद्यम गरिआएका छन्। तिनले मुलुक र जनताप्रति, लोकतन्त्र र राज्य व्यवस्थापनका सार्वभौम नियम, प्रक्रिया र पद्धतिप्रति बिल्कुलै अप्रतिबद्ध आफ्ना हुक्के, बैठके र सुसारेलाई ढुकुटीको साँचो सुम्पेका छन्। र, जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा त उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ताको आवाज सुनिरहेका छैनन्। उनीहरूले आफ्ना महाधिवेशनमा रचना गरेका र पारित गरेका नीति र कार्यक्रम एवं निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरू आल्मारीमा कतै थन्किएका छन् अर्को चुनावमा सार्नका लागि ती आवश्यक हुन सक्छन्। चिनियाँ लोककथाको व्यापारी कमसेकम प्रश्नको उत्तर दिन नसकी चूप लागेको थियो, हाम्रा राज्यका नेताहरू त उत्तर दिन नसकेर प्रश्न गर्ने जिज्ञासुमाथि झम्टिन आइपुग्छन्। हाम्रो राज्य ढँटुवा भएको छ।
यतिबेला एमालेको सिंगो हेडक्वार्टर प्रदेश नम्बर दुईमा छ। एमालेका नेताहरू त्यहींँ आफ्ना कुरा जनतालाई सुनाइरहेका छन् र ऊ कसरी मधेसमैत्री छ भनेर सम्झाइरहेका छन्। तर ठीक यहीबेला राजपा त्यहाँ छैन। त्यहाँ अर्थात् तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुने जमीन सप्तरीदेखि वीरगन्जसम्म। यसले त ऊ स्वयं मधेसप्रति उदासीन छ भन्ने नै देखाउँछ। यस बर्खायाममा काठमाडौँका काँचका पर्दाका बहस सुन्न मुसहर, खत्वे, धानुक, चमार लगायतका अन्यान्य गरीब र पिछडिएका कृषि मजदुरहरूलाई कुनै चासो हुँदैन अनि संविधान संशोधनले तिनको पेट पाल्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने उनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन को को कति हदसम्म जिम्मेवार छन्। त्यसकारण यस स्थानीय चुनावको विवेकपूर्ण तयारीको अवस्थामा उनीहरूको अनुपस्थिति वा राजधानीवासले उनीहरूले भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने कठिन प्रश्नहरूको रचना गर्दैछ।
तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि उभ्याइएको तेस्रो कारणमा परराष्ट्र सम्बन्ध थियो र त्यसमा पनि ओलीलाई उत्तर ढल्केर दक्षिणसँग दुश्मनी मोलेको तथा प्रकारान्तरले दुई छिमेकीबीच सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको भनिएको थियो। ओलीको विस्थापनसँगै दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर एउटालाई उत्तर र अर्कालाई दक्षिण पुर्‍याए पनि सम्बन्धमा उल्लेख्य सन्तुलन आएकोे महसुस गर्न लायक सूचक केही पनि देखिएको छैन। बरु, सन्तुलन झन्झन् खल्बलिँदै गएको चिन्ताजनक अनुभव दुवैतर्फका मिडिया र विचार निर्माता (थिंक ट्यांक) हरूले गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म न चीनलाई न त भारतलाई नै आश्वस्त गर्ने काम भएको छ। यसरी ओलीका कारण नेपालको सम्बन्ध असन्तुलित भएको थियो भने नयाँ गठबन्धन सरकारले यसलाई सही बाटोमा ल्याउन के के प्रयत्न गर्‍यो र त्यसबाट नेपालको समृद्धिमा के सकारात्मक योगदान पुग्यो भनी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। अफसोस, भारतले भूकम्प प्रभावितहरूको पुनःस्थापन सहयोगका लागि गरेको प्रतिबद्धता नै पूरा गर्न बाँकी रहेको तर्फ भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा सुनिएको छ। हुलाकी मार्ग अलपत्र परेका समाचार हामी देखिरहेकै छौँ। यसरी पहिल्यै सहमत भइसकेका र नियमित च्यानलबाट नियमित रूपमा हुने काम पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा स्मरण गराउने हालतमा पुग्छन् भने परराष्ट्र सम्बन्धमा केको आधारमा सन्तुलन र सुधार आएको दाबी गर्न सकिन्छ?
अनुभव गर्न सकिने केही हलचल अवश्य भए। एक वर्षमा दुई प्रधानमन्त्री फेरिए। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ फेरिए। प्रहरीका डिआइजी फेरिए। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्तारूढ दलहरूले नै महान्याधिवक्तासमेतको परामर्र्शमा पहिलोपटक महाअभियोग लगाए। प्रधानन्यायाधीश पेसाप्रति जागरुक, मुलुकप्रति निष्ठावान् र कर्तव्यप्रति सचेत महिला साबित भइन्। सरकार र सरकारमा सामेल दलका नेताहरू राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभवमा कच्चा, न्यायप्रणालीप्रति असहिष्णु र महिला नेतृत्वप्रति अविश्व्ाासी साबित भए। राजनीतिक अदूरदर्शिता र खराब नियतबाट ल्याइएको सो अभियोग पनि अप्रमाणित भएकाले फिर्ता भयो। यस्तै कारणहरूले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ। तैपनि कुनै नैतिक कारणले सरकार हार्दैन, निरन्तर न्याय र न्यायप्रेमी जनता हारिरहेका छन्। दलहरूले सामान्य नैतिकताको पनि ख्याल गर्न सकेको देखिन्न।
कांग्रेस–माओवादी–मधेसकन्द्रित दलहरूको गठबन्धनले सत्ता सम्हालेको यो वर्ष नेपालको निर्वाचनको इतिहास पनि कुनै उपयुक्त कारणविना विकृत भयो। उपयुक्त राजनीतिक या प्राविधिक कारण नभइकनै नेपालजस्तो एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिने क्षेत्रफल भएको सानो मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन पनि तीन तीन चरणमा गर्ने काम भयो। यसको जवाफ मधेसतिर फर्काइएको छ जो निर्वाचनमा जान र मत दिन आतुर छ। तर त्यो मधेसकेन्द्री नेता र सरकारले सुनिरहेका छैनन्। सरकारले केही मधेसकेन्द्री नेताहरूलाई चिनेको छ, जसले उसलाई टेको लगाएका छन्, त्यो मधेसको जनतालाई चिनेको छैन जसले नेपाललाई सिंगो राष्ट्र बनाएर केहीलाई सरकारमा पुर्‍याएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना प्रकरण पनि उत्तिकै विवादास्पद रह्यो। सरकारले न्यायालय र निर्वाचन आयोगजस्ता स्वायत्त संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको अनुभव पनि गरिएको पाइयो। न्याय र कानुन कुन श्रेष्ठ भन्ने उहिल्यै टुंगिएको विवाद पनि सतहमा आयो। कसैले नियतवश मतपत्र च्यातेमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने नजीर स्थापना भयो। यसले नेपालको निर्वाचन ऐन मस्यौदा गर्ने र पारित गर्ने निर्वाचित र समानुपातिक महानुभावहरूको क्षमतामाथि प्रश्न त उठाएकै छ, न्यायालयको आँखा र विवेकलाई पनि जनमानसमा छलफलको विषय बनाएको छ। अनुभवबाट सिक्तै जानेलाई त यस्ता कुराले भविष्यमा कसरी ऐनकानुन र नीति, नियम बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउला तर नकारात्मक पवृत्ति बढी हावी भएको नेपालजस्तो मुलुकको राजनीतिमा यस्ता नजीर द्वन्द्व बढाउने उपकरण बन्न बेर लाग्नेछैन।
अर्कोतिर कृष्णप्रसाद भण्डारी र निलाम्बर आचार्यहरूको कानुनी दृष्टि र दक्षता टिठलाग्दो विगतमा फर्किएको छ। ती स्वतन्त्र छन् र तिनले देखेको जम्मै उल्टो भइदिन्छ। हामीले अब आलोचनात्मक विवेक गुमाइसकेका छौँ। नेताको तारिफ गर, जिन्दगीको जाउलो पकाऊ, नत्र रछ्यानमा मिल्काइनेछौ। किनभने सबै दलहरूले शक्तिशाली ग्याङविज्ञहरू तयार गरेका हामीले देखेका छौं। योग्यता, दक्षता र क्षमताको सायद अब कुनै ठाउँ छैन।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०८:५४ बिहीबार